🥇 ▷ Cosmos cimri dherer leh, HTC wuxuu daaha ka qaadaa qiimaha iyo helitaanka taariikhda ✅
Cosmos cimri dherer leh, HTC wuxuu daaha ka qaadaa qiimaha iyo helitaanka taariikhda
HTC VIVE waxay soo bandhigaysaa astaamaha iyo shaqeynta madaxdeeda cusub ee Vive Cosmos maanta, qiimaheeda iyo taariikhda la iibiyay, ma ahan in lagu xuso gunnooyinka la soo bandhigo dhammaan amarradii hore.
Vive Cosmos waa nidaamka ugu sareeya heerka ugu sarreeya ee xaqiiqda casriga ah (VR) ee loogu talagalay PC, loogu talagalay inuu ku bixiyo heerka ugu habboon ee helitaanka iyo fududeynta adeegsiga. Waxay isu beddeshaa waqti kadib iyadoo loo eegayo baahida isticmaaleyaasha taas oo ay ugu wacan tahay naqshadeynteeda qaab dhismeedka hore ah oo wax ka beddeli karto shaqeynta koofiyadda, tusaale ahaan nooca cusub ee ‘Vive Cosmos External Tracking Mod’. Cosmos waxaa lagu iibin doonaa Yurub 3-da Oktoobar qiimo ahaan waa € 799, waxaana loo qoondeyn karaa amar-bixinta kahor bisha Sebtember 12.
Graham Wheeler, madaxa shirkadda Vive Europe ayaa hoosta ka xariiqay
Vive Cosmos, astaamo farsamo
Vive Cosmos waxaa loogu talagalay inay la jaan qaado baahiyaha iyo rajooyinka macaamiisha VR, waxayna muujineysaa saaxiibtinimada, wadajirka iyo waxqabadka. Nidaamka cusub ee raadraaca Vive-ku wuxuu dammaanad ka qaadayaa rakibitaan la fududeeyay oo aan weligiis horay loo arag si aad naftaada uga quusato VR adduunka sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah: 6 dareemayaal kaamirooyin ah oo lagu ogaanayo dhaqdhaqaaqa gudaha.
Cosmos waxay bixisaa xallin isku dhafan oo ah 2880 x 1700 pixels, 88% in ka badan Vive asalka ah, dammaanad qaamuuska qoraalka iyo sawirrada fiiqan. Shaashadda cusub ee LCD waxay xaddideysaa masaafada u dhaxaysa pixels iyo, oo ay weheliso shaashadda midabaynta RGB, yaraynta furitaanka ama saamaynta shaashadda.
Naqshadeynta qaaska ah ee dib-u-laabashada ayaa kuu oggolaaneysa inaad ka beddelato runta oo aad uhesho xaqiiqada dalwad ahaan ilbiriqsiyo, dhammaantood adigoon carqaladayn waayo-aragnimada VR. Ergonomics iyo raaxeysigu waa kuwo aan fiicnayn oo u oggolaanaya in ay kordhiyaan kicinta, gaar ahaan sida dhagaha dhegaha ee lagu dhisay dhegaha-dhegaha waxay bixiyaan dhawaaq gebi ahaanba is dhexgalka ah. Cosmos sidoo kale waxaa lagu qalabeeyay ilaaliyayaal dib loo habeeyay oo kor u qaadaya waxqabadka VR, si loo hubiyo raaxo sarre inta lagu jiro kalfadhiyada dheeraadka ah. Waxa kale oo ay la jaan qaadaya Vide Wireless Adapter-ka si loogu raaxeysto VR iyada oo aan xadhkaha la jabin.
Astaamaha farsamada ee Vive Cosmos
Xalka: 1440 x 1700 pixels hal ilkiiba (2880 x 1700 pixels isugeyn)
Shaashadda: labaal shaashadda LED 3.4 ag jaantus
Heerka Refresh: 90 Hz
Goobta aragtida: 110 digrii
Cod maqalka: Qalabka dhagaha istcimaal ee stereo-on-board
Ku xirnaanta PC-ga ayaa loo baahan yahay: USB-C 3.0, Display PortTM 1.3
Agabyada: USB-C 3.0, fiiladda isku xirka alaabada lahaanshaha alaabada mod
Korjoogteyn: ugu yaraan xaddidida booska booska / fadhiga, ugu yaraan 2 m x 1.5 m habka cabbirka qolka
Wejiyadaha moodada: Vive Motion Mod (oo ay kujirto Cosmos) iyo Modive External Tracking Mod (oo si gooni gooni ah loogu iibinayo)
Taageerada loo habeeyo Wireless Vire Wireless: Haa, waxaa si gaar ah loogu iibiyaa xirmada lifaaqa. Afyareedka PCIe ee jira ayaa loo baahan yahay.
Koofiyadda ‘modular’ ee ugu horreysa
Iyada oo leh qaabkeeda hore ee modular, Vive Cosmos waa madaxa ugu sarreeya ee ugu sarreeya ugudambaynta VR ee suuqa. Qalabka u go’ay sida ugu dhaqsaha badan ee la heli karo ayaa markaa beddeli doona halka koofiyadda loo dirayo, taasoo u oggolaaneysa inay isbeddel ku timaado waqti ka dib. Qalabka ugu horeeya ama “mod” ee suuqa, ‘Mod Tracking Mod’, oo la soo bandhigay maanta, ayaa loogu talagalay macaamiisha doonaya inay u isticmaalaan saldhiggooda Lighthouse saldhigga ujeeddooyinka kormeerka, iyagoo ka faa’iideysanaya waxqabadka sare ee Vive Cosmos. Modulekan ugu horeeya wuxuu la jaan qaadayaa saldhigga asalka wuxuuna taageeraa cilmiga deegaanka ee aaladaha Vive, gaar ahaan Vive Tracker kaas oo u oggolaanaya xorriyadda habboon ee dhaqdhaqaaqa kontoroolka VR. Qaybtan cusub ayaa la suuq geyn doonaa bilowga 2020.
Tilmaamo cusub ayaa lagu daray
Vive Cosmos waa madaxa ugu horreeya ee VR ee bixiya helitaanka qaddar cajiib ah oo ka kooban, taas oo ay ugu mahadsan tahay ku-diritaanka 12 bilood ee adeegga adeegga Viveport Infinity. Waxaa la siiyaa dadka horay u dalbanaya koofiyadda, oo sidaas darteed ku gaari doona keyd badan.
Macaamiil kasta oo dalbanaya Cosmos kahor Oktoobar 2 wuxuu heli doonaa lambar siinaya rukummada 12-ka bilood ee rukhsad la siinayo. Buug-yaraha ‘Viveport Infinity Katalog’ waxaa ku jira boqolaal barnaamijyo caan ah, ciyaaro iyo vidiyowyo ay ka mid yihiin Kalluumeysatada Fisherman, Fujii iyo Ninja, iyo sidoo kale fiidiyowyo qaali ah oo laga soo qaatay noocyada ugu sareeya sida GoPro, Discovery Channet iyo Planet Animal Planet. Munaasabadda lagu soo bandhigayo koofiyadda Vive Cosmos, Viveport Infinity sidoo kale waxay ku dari doontaa cinwaanno cusub sida Doctor Who: The Edge of Time (BBC), Fikradda sayniska ee kow iyo tobanka kow iyo tobanka ah, Atlas V’s Gloomy Eyes, Erayadii Gumi ee Gargantua, MLB Home Run Derby waxaa qortay MLB iyo waxbadan oo dheeri ah.
Nidaamka Xaqiiqda Vive
Sida ugu dhakhsaha badan ee aan loo xirxiran, Vive Cosmos wuxuu kuu oggolaanayaa inaad naftaada si toos ah ugu dhex gasho adduunyada meheradaha ah, mahadsanid nidaamka cusub ee Vive Reality. Waa koofiyaddii ugu horreysay ee la siiyo helitaan nidaamkan, oo ah barnaamij dib-u-habeyn loogu talagalay Vive oo leh falsafad cusub oo cusub oo loogu talagalay VR, iyadoo la bixinayo kordhinta dhabta ah. Isticmaalaha hadda ma haysto dareenkan bilowga ah ee codsiyada, laakiin waa tan ka boodista hal adduun ilaa mid kale.
Cosmos-ka ayaa leh dib u eegis adeegsiyadeed. Waxaa loogu yeeraa Lens, waxay fududeyneysaa socodka gudaha xaqiiqda dheereysa (XR) iyo codsiyada ku jira buugga macluumaadka ‘Viveport Infinity’, oo leh meel cusub oo firfircoon oo loo yaqaan “Origin.” Dambe wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka faa’iideysato codsiyada VR iyo khibradaha is-dhexgalka, tiradaas oo markii dambe sii kordheysa.